Iindaba-Iimpawu kunye nokusetyenziswa kweefayile zealuminium zeshishini
1. Kukho iinkcukacha ezahlukeneyo kunye nobukhulu, kunye nobukhulu becala elide kunye necala elifutshane liphindaphindwe. Umzekelo, i4040, 4080, 40120, 4040, isikwere, onke amacala amane angama-40mm, kunye nama-4080 licala elide elingu-80mm. Icala elifutshane ngu-40mm, kwaye icala elide liliphinda kabini icala elifutshane. Ewe kukho ezinye ezizodwa, ezinje nge-4060, icala elide liphinda-phinde ngo-1.5 icala elifutshane.
2. Zimbini kuphela ii-slot ububanzi, 8mm kunye ne-10mm. Nangona kukho amakhulu enkcazo yeeprofayili zealuminium zeshishini, iindawo zabo zokubeka kuphela ubukhulu bobabini, ngakumbi incinci, umzekelo, i-2020 slot yi-6mm. Oku kukusebenzisa izixhobo eziqhelekileyo. Siyazi ukuba iiprofayili ze-aluminium zeshishini ngokubanzi zidityaniswe ziibholiti kunye neekona zekona, kwaye ezi zinto zinokubalula okuqhelekileyo, ke indibano yezixhobo kufuneka iqwalaselwe xa kuyilwa iiprofayili zealuminium.
3. Zimbini iintlobo zomgangatho kazwelonke kunye nomgangatho waseYurophu. Umahluko phakathi kweprofayili esemgangathweni yase-aluminium kunye ne-standard standard ye-aluminium yesizwe ikwincwadi yenotshi. Umgangatho waseYurophu yindawo ekuthiwa yitrapezoidal groove ephezulu ephezulu kunye nencinci. Umgangatho we-groove kazwelonke ngumjelo oxande, ofanayo nowaphezulu kunye nezantsi. Izihlanganisi ezisetyenziswe kumgangatho wesizwe kunye nomgangatho waseYurophu zahlukile. Ngokwam ndicinga ukuba iprofayile yase-aluminium esemgangathweni yaseYurophu ibhetele. Umgangatho waseYurophu uneenkcukacha ezingaphezulu komgangatho kazwelonke. Kukwakho neeprofayili zealuminium ezingezizo ezemveliso ezinokusetyenziswa nezihlanganisi ezisemgangathweni zaseYurophu okanye izihlanganisi ezisemgangathweni zikazwelonke.
4. Ubungakanani bodonga lweeprofayili zealuminium zeshishini azizukubhitya kakhulu. Ngokungafaniyo neeprofayili ze-aluminium zokwakha, iiprofayili ze-aluminium zorhwebo kuphela zidlala indima yokuhombisa, kwaye ubukhulu bodonga buya kuba mncinci kakhulu. Iiprofayili ze-aluminium zeshishini ngokubanzi zidlala indima exhasayo kwaye zifuna umthwalo othwala umthwalo, ke ubukhulu bodonga akufuneki bucutheke kakhulu.
Iphrofayili ye-aluminium ye-Industrial yinto ye-alloy, eneendawo ezininzi zokusetyenziswa kwaye iyaziwayo kwimarike yangoku. Ngenxa yobuchule bayo bemibala, iikhemikhali kunye nezinto ezibonakalayo, ngokuthe ngcembe ithatha indawo yezinye izinto zentsimbi kwaye iba yinto esetyenziswa kumashishini amaninzi.
Ukuthetha ngokubanzi, iiprofayili zealuminium zeshishini ziiprofayili zealuminium ngaphandle kweminyango kunye neefestile, ikhethini yodonga lwealuminium, kunye neeprofayili zeoyile yoyilo loyilo. Umzekelo, uhambo oluthile lukaloliwe, umzimba wezithuthi, imveliso kunye nealuminium ephilayo inokuthiwa yiprofayili yealuminium. Ngengqondo emxinwa, iprofayile yealuminium yoshishino yinkqubo yealuminium yomgaqo, eyiprofayili enqamlezileyo eyenziwe ngeentonga zealuminium ezinyibilikisiweyo kwaye zibekwa ekufeni ukuze zikhutshwe.
Olu hlobo lweprofayili lukwabizwa ngokuba yiprofayili ye-aluminium extrusion, iprofayile yealuminium alloy. Inoluhlu olubanzi lokusetyenziswa kwaye inokusetyenziswa kumashishini amaninzi. Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kukwenza izixhobo zokubeka ezahlukeneyo, izixhobo zokuzikhusela, izixhaso zekholamu enkulu, iibhanti zokuhambisa umgca wokudibanisa, izakhelo zomatshini wokugquma, izixhobo kunye nezinye izixhobo zamathambo. Nantsi intshayelelo emfutshane ekusetyenzisweni kweeprofayili zealuminium ngendlela encinci, ngolu hlobo lulandelayo:
1. Izixhobo zesakhelo sealuminium, isakhelo sealuminium
2. Umtya webhunga webhentshi lomsebenzi, inkxaso yokuhambisa ibhanti, ibhentshi yomsebenzi
3. Ucingo locingo lokusebenzela, izixhobo ezinkulu zokukhusela, isikrini esikhanyayo kunye nescreen-arc screen
4. Iqonga elikhulu lokugcina kunye nokunyuka kweleli
5. Isibiyeli sezixhobo zonyango
6. Isibiyeli esinyukayo seFotovoltaic
7. Isibiyeli se simulator yemoto
8. Iishelufa ezahlukeneyo, iirack, igumbi elikhulu lokulima izinto eziluhlu
9. I-Workshop turnover cart, izixhobo zealuminium
10. Umboniso omkhulu wee-racks zokubonisa, iibhodi zokubonisa ulwazi kumasifundisane, iibhodi ezimhlophe
11. Igumbi elangeni, ishedi ecocekileyo
Ukongeza ekusebenziseni okukhankanywe apha ngasentla, inokwenziwa nakwisakhelo seemveliso ezahlukeneyo. Ngokubanzi, ungayisebenzisa nanini na ufuna. Kufuneka kuqatshelwe ukuba kuninzi ukubalulwa kweefayile zealuminium zeshishini, kwaye unokukhetha izinto ngokweemfuno zakho xa ukhetha. Zonke zinxibelelene nezixhobo zealuminium ezifanayo, ezikhuselekileyo kwaye zizinzile, kwaye kulula ukudibanisa.